Posted ဇန်နဝါရီ 14, 2018
Posted ဒီဇင်ဘာ 31, 2017
Posted ဒီဇင်ဘာ 26, 2017
Posted ဒီဇင်ဘာ 16, 2017
Posted ဒီဇင်ဘာ 6, 2017
လည်ပင်းကျီးပေါင်း - အလုပ်သမားများဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောဝေဒနာ
Posted နိုဝင်ဘာ 19, 2017
Posted နိုဝင်ဘာ 13, 2017
Posted နိုဝင်ဘာ 8, 2017
HFMD (Hand, foot and mouth diseases)
Posted နိုဝင်ဘာ 7, 2017
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအထူးဂရုပြုသင့်သောအန္တရာယ် - လမစေ့မီရေမြွှာစောပေါက်ခြင်း
Posted နိုဝင်ဘာ 6, 2017
အမျိုးသမီးများနှစ်သက်ဝတ်ဆင်သောဒေါက်မြင့်ဖိနပ် လှပသော်လည်း.... နာကျင်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွယ်ပြဿနာ
Posted အောက်တိုဘာ 30, 2017
Posted အောက်တိုဘာ 20, 2017
အသည်းရောင်အသားဝါ စီ: သတိမပေးဘဲဝင်ရောက်လာနိုင်သောစိုးရိမ်ဖွယ်ရောဂါ
Posted အောက်တိုဘာ 2, 2017
အသည်းရောင်အသားဝါ - စီ အသံတိတ်ခြိမ်းခြောက်မှုများ နှင့် လက်ရှိအန္တရာယ်
Posted စက်တင်ဘာ 29, 2017
Posted စက်တင်ဘာ 27, 2017
Posted စက်တင်ဘာ 26, 2017
Posted စက်တင်ဘာ 25, 2017
Posted စက်တင်ဘာ 14, 2017
အူအတက်ရောင်ခြင်း (Appendicitis) အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Posted စက်တင်ဘာ 11, 2017
စိတ်ဖိစီးမှု ကြောင့် အစာအိမ်ရောဂါ ပိုဆိုးနိုင်ပါသလား???
Posted စက်တင်ဘာ 4, 2017
Posted မတ် 31, 2017
စောလျှင်စွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမှ တစ်ဆင့် - ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှု၏ အရေးပါပုံ
ကလေးငယ်များတွင် အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအောက်ပိုင်း သွေးထွက်ခြင်း - ဘာလုပ်သင့်လဲ။
ကျောရိုးဆစ်ကြားရှိ အရိုးနုပြားကျွံခြင်း၏ သတိပေးလက္ခဏာများနှင့် သိထားသင့်သော ရွေးချယ်စရာ ကုသနည်းများအကြောင်း
အရိုးခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် နာလန်ထမြန်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
Udom Suthiponpaisan, Gp.Capt.,M.D.
Our health library contains 1722 articles and counting...